Tana-Masoandro : Fanimban-javatra sy herisetra, sivily iray tapa-tongotra, zandary dimy naratra
jeudi, 17 octobre 2019 22:49
Latsaka rà teny Ambohitrimanjaka androany. Niitatra tamin’ny fanimban-javatra ny fanoheran’ny olona ny firosoan’ny fanjakana amin’ny fanatanterahana ny tetikasa Tanà-Masoandro. Nisy olona dimy voasambotra, niainga tamin’ny sary azon’ny mpitandron’ny filaminana.
Nony hariva dia nisy andian'olona nitaky ny hamotsorana ireo namany voasambotra. Niakatra ny hafanana, nisy nitora-bato ireo Zandary. Nisy naratra tamin’ireto farany, ka sady nihemotra no nampiasa grenady lakrimôzena nanaparitahana ny olona.
Tsy nihemotra ny olona, ary tena nasiaka. Mety tsy nampoizin’ireo Zandary haharitra ny fifanandrinana tamin’ireo manohitra ny hanotorana ny tanimbariny mba hanaovana ity tetikasa Tanà-Masoandro ity, ka lany vatsy lakrimôzena. Nanao tifi-danitra ireo Zandary nanaparitahana ny olona. Lehilahy iray no tapaka ny ranjony. Niparitaka tamin’ny facebook ny sariny. Tsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha izy io amin’izao fotoana izao, ary raha ny angom-baovao, dia tapaka noho ny fianjerana no nahavoa azy fa tsy ratrana bala.
Araka ny loharanom-baovao akaiky ny Zandary dia nisy roa tamin’ny olon’izy ireo naratra mafy tao anaty fifanjevoana, ary nisy roa tsy hita. Natao ny fikarohana, hoy hatrany ny loharanom-baovao, dia hita ireo roa ireo. Voamafy eo amin’ny lohany, tsy mahatsiaro tena noho ny haverezan-dra betsaka, ny zandary iray. Nentina avy hatrany tao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha ihany koa izy hotsaboina.
Milamindamina ny toe-draharahana nony niha alina ny andro. Niampy ireo mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana. Ny olona nihemotra namonjy tanàna. Misy valo (08) kosa io hariva io no nosamborina ary notanana.